1 janoary: Masina Maria Renin’Andriamanitra – Trinitera Malagasy
Boky Fanisana 6,22-27 /
Md Lioka 2, 16-21
Amin’ny fankalazana ny taona vaovao, talohan’ny Konsily dia nankalazaina ny famorana ilay zanak’i Maria sy ny fanomezana ny anarana hoe Jesoa. Anarana izay ankalazaina ny 3 janoary ankehitriny, ary henontsika o amin’ny evanjely ankalazaina anio, araka ny fitantaran’i Md Lioka. Ary hatramin’ny 1968 dia natokan’ny Papa Md Paul VI ho andro iraisam-pirenena ho an’ny Fiadanana sady ankalazana an’i Masina Maria, Renin’Andriamanitra.
Dia izay tsodrano izay no ambaran’ny vakiteny voalohany indrindra: “hitahy anao sy hiaro anao anie ny Tompo, hampamirapiratra ny tavany aminao anie izy sy hamindra fo aminao. Hampitodika ny tavany aminao sy hano me fiadanana anao anie ny Tompo”. Ny tsodrano zava-mahery , hoy ny fombandrazantsika, satria mitondra fiadanana.
Ny hevitry ny barak (tsodrano) moa dia hoe miteny tsara, mankalaza. Izay nahazo soa dia tsy afaka ny tsy hidera ny mpanao soa, ary izay te hanao soa kosa dia mitalaho ny tsodranon’izay mahery kokoa noho izy mba hahaleo hahalasana. Teo amin’Israely dia zava-dehibe izany tsodrano izany. Tsy azo adinoina ny tantaran’i Esao sy Jakoba, naka ny tsodranon’i Abrahama (Jen 27-28).
Voalaza ao amin’ny Evanjely fa afaka havaloana dia noforaina ny zaza ary nomena ny anarana hoe Jesoa, Andriamanitra mamonjy, araka ny voalazan’i Md Matio hoe hamonjy ny olona ho afaka amin’ny jiogan’ny fahotany (Mt 1,21). Tsy hoe entina hanavahana fotsiny manko ny anarana amin’ny fomba tatsinana fa manambara ny maha-izy azy ny olona, maneho ny iraka ampanaovina azy na andrasana aminy.
Ny famorana moa dia nentin’Israely hanamarihana ny fanekem-pihavanana nataony tamin’YHWH. Tsara ho marihina anefa fa tsy mahatoky tamin’izany fanekem-pihavanana izany ny vahoaka, nalaky nivadika, manaraka andriamani-kafa. Fifanekena an-kalalahana ka najain’Andriamanitra marina tokoa izany fahalalahan’ny vahoakany izany. i Jesoa kosa, nanaiky ho teraka tambanin’ny lalàna, no nirahiny mba hanafaka izay rehetra tambanin’ny lalàna mba hatsangany ao amin’ny Fanahiny ho zanaka mpandova (Ga 4, 4-7 Vak II). Ilay Teny tena Andriamanitra, tonga Israely vaovao, araka izany no nentin’Andriamanitra nandavorary ny Fanekem-pihavanana, ka ao amin’i Jesoa no hahafahantsika manantena ny “eny” avy amin’Izy Tompo sy avy amintsika olombelona.
Jesoa no anarany, Andriamanitra mamonjy, satria mampahafantatra antsika ny tena endrik’ilay Andriamanitra tsy hita, maneho amintsika ny halehiben’ny voninahiny, ary izany rehetra izany dia amin’ny fitondrany antsika amin’ny fahasambarana maha-zanaka, amin’ny famonjena.
Dia io Zanak’i Maria io no zanak’Andriamanitra, voatsodranony, ary avy aminy no hahazoantsika ny Fanahy hahatongavantsika ihany koa ho mpiray lova aminy (Vak II). Izay finoana ny maha-zanak’Andriamanitra an’i Jesoa izay no ankalazantsika an’i Masina Maria ho Renin’Andriamanitra. Izy no ilay zanaka “iray fomba amin’ny Ray” (Homousios), izay nanoheran’ny Konsily tany Nicea ny taona 325 an’i Arius izay nihizingizina fa tsy misy hifandraisany amin’ny Ray i Jesoa, ary noho ny fampianaran-dison’i Nestore izay nilaza fa fiombonan’ny olon-tsotra amin’ny olona ao amin’ny Trinite Masina i Kristy hany ka nohamafisin’ny Konsily tao Efezy fa i Jesoa, Ilay Teny tonga nofo, dia tsy hafa fa ilay olona faharoa ao amin’ny Trinite Masina ka nanambarany miezinezina ny 421 fa i Masina Maria dia Theotokos, Renin’Andriamanitra, ankalazaintsika anio. Ary ny fiekem-pinoana ataontsika dia mbola nohamafisina fa tsy misaraka ary tsy mifangaro ny maha-olona sy maha-Andriamanitra an’i Jesoa Kristy (Calcédoine 451), nialana tamin’ny hevi-dison’ny monophysite.
Ho tonga tsodrano ho antsika ho an’ity taona vaovao ity anie ny fanavaozantsika ny finoantsika an’i Jesoa Kristy, tena Andriamanitra sy tena olombelona, iray fomba amin’ny Ray ary nidina avy any an-danitra ho famonjena antsika.
Masina Maria, tsodrano